၁၁:၄၆၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ
၁၃:၁၆၊ ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၁:၄၆၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အဘ့်လိုင်ခန်း (Ablai Khan) သည် ၁၈ရာစုအတွင်း [[ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ]]၏ နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သော အလယ်ပိုင်း ဂျဇ့် (Middle Jüz) ၏ အကြီးအကဲ ခန်း ဘုရင်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ၄င်းအား၎င်းအား ၁၇၁၁ခုနှစ် တွင် မွေးဖွားသည်။ ၁၇၈၁ခုနှစ်၊ မေလ၂၃ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည်။
သူ၏အမည်အပြည့်အစုံမှာ ဝါလီ အူလာ အဘူ မန်ဆာ ခန်း ဖြစ်သည်။ ၁၅ရာစု တွင် ကာဇက်နိုင်ငံကို တည်ထောင်သူဖြစ်သော ဂျာနီဘာခ့်ခန်းမှ ဆင်းသက်လာ သူ ဖြစ်သည်။ ၁၈ရာစု ပထမထက်ဝက်အတွင်း ၄င်းသည်၎င်းသည် ဇွန်းဂါးလူမျိုးများကို ဦးဆောင်တွန်းလှန်ကာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အဘ့်လိုင်ခန်းအား ကာဇက်ပြည်သူ များက ဘေတာ (သူရဲကောင်း) ဟု ကင်ပွန်းတပ်ကြလေသည်။
၄င်းအား၎င်းအား [[တရုတ်]]နှင့် [[ရုရှား]] နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ကာဇက်ခန်းဘုရင်တစ်ပါးအဖြစ် အ သိအမှတ်ပြုသည်။ သူသည် ကိုးကန်းစော်ဘွားနယ်နှင့် ကာဂျစ်လူမျိုးများအပေါ် တိုက်ပွဲများစွာ ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ သူ၏နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတွင် သူ၏စစ်သည်တော် များသည် ကာဇက်စတန်တောင်ပိုင်းမှ မြို့များကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီး တရှ့်ကင့် မြို့ကို ပင် အောင်နိုင်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ယနေ့ခေတ် ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနေရာကိုပင် အောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါအရပ်မှ စစ်ဘုရင်များ နှင့်လည်း ပြင်းထန်သောစစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ <ref>Perdue, Peter C (2009). China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Harvard University Press. p. 274. ISBN 978-0-674-04202-5.</ref>
၁၇၈၁ခုနှစ်၊ သက်တော် ၇၀ အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူ၏ အလောင်းကို [[ဟာဇရက်အီ တာကီစတန်မြို့]]တွင် မြှုပ်နှံထားသည်။
၁၉၄၁ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်သော အဘ့်လိုင်ခန်း တက္ကသိုလ်သည် ၄င်းအား၎င်းအား ဂုဏ်ပြုမှည့်ခေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
၄င်း၏ဘဝကို၎င်း၏ဘဝကို အခြေခံကာ ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ၂၀ဝ၆ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိသော နောမက် အမည်ရှိ သမိုင်းနောက်ခံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ယင်းဇာတ်ကားတွင် အဘ့်လိုင်ခန်း (သို့မဟုတ်) မန်ဆာ အဖြစ် မက္ကဆီကန် သရုပ်ဆောင် ကူနိုဘက်ကာ က သရုပ်ဆောင်သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/342750" မှ ရယူရန်